theZOMI: Burma News International - March 18, 2013
Burma News International - March 18, 2013
The head ofaUN delegation to Myanmar has said that he is greatly encouraged by the country's reforms but stressed that transparency is needed in the area of foreign aid in Myanmar.
Some 2,000 internally displaced people and villagers from the Wei Gyi area gathered on March 14 by the Salween riverbank to protest continued plans to construct six hydroelectric dams on the river.
Parliament takes first step to revise Constitution
Myanmar's government has madeasignificant move toward fully democratizing the country by approvingamotion to formacommittee and commission to review the country's controversial 2008 Constitution.
The Minister of Finance and Revenue announced on March 15 that all civil servants will receivea20,000 kyat monthly pay rise beginning in April; however, government employees have voiced concern about the raise in salaries effecting inflation.
google-logoGoogle's executive chairman Eric Schmidt will be the first high-profile tech representative to visit Myanmar when he travels to the country later this week.
The vice-minister of Myanmar’s Department of Social Welfare has said that labor attachés will be positioned in those countries which have large amount of Myanmar migrant workers.
The Ministry of Finance and Revenue has announced that, as from March 15, Myanmar citizens can now travel to foreign countries without producingatax clearance document.
Myanmar armed forces backed by police and customs officials have seizedahuge cache of arms and narcotics fromahideout in the border town of Tamu in Sagaing Region.
မြစ်ကြီးနား - ဗန်းမော် ကားလမ်း ပြန်ဖွင့်
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လပိုင်းက စတင်ခဲ့သည့် KIOနှင့် အစိုးရတပ် နှစ်ဘက်တိုက်ပွဲများကြောင့် တစ်နှစ်ကျော်ကြာ ကား အသွား အလာများ ရပ်ဆိုင်းနေသော မြစ်ကြီးနား - ဗန်းမော်ကားလမ်းကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းက စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီး ဗန်းမော်မှ မြစ်ကြီးနားသို့ ကား ၈ စီး စတင်ထွက်ခွာကြောင်း သိရသည်။
ဓါးထိုးသတ်ခံရ ကျားဖြူဥက္ကဌတူ အမှုကို မတ်လ ၂၂ ရက် နေ့တွင်ရုံးပြန်ချိန်း
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နမ့်ခမ်းမြို့ တွင် လူသတ်မှုကျူးလွန်သော ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်(ပန်းဆေး ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်) ဦးကျော်မြင့်၏တူ ရဲအောင်ထွေး(ခ) လိဖန် နှင့် အပေါင်းအပါ အိုက်ဆမ် တို့အား ယခုလ ၁၄ ရက်က မူစယ်ခရိုင် တရားရုံး၌ ရုံးထုတ်စစ်ဆေးပြီးနောက် ၂၂ ရက်နေ့တွင် ထပ်မံရုံးချိန်းလိုက် ကြောင်း သိရှိရသည်။
အသရေဖျက်မှုဖြင့် Pastor တဦးတရားစွဲ ဆိုခြင်းခံရ
မြန်မာနိုင်ငံ၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ထန်တလန်မြို့ နေ Pi Khual Dim ၏ နေအိမ်တွင် အရက်ရောင်းဝယ်သည့် စွပ်စွဲချက်ဖြင့် စစ်ဆေးခဲ့သူ (သင်းအုပ်ဆရာ) Pastor Sang Hre Lian နှင့် အဖွဲ့အား အသရေ ဖျက်မှုဖြင့် အမှုဖွင့် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတွက် အကျဉ်းသားဟောင်းများ ထောင်ထွက်လက်မှတ် လိုဦးမည်
နိုင်ငံကူး လက်မှတ် ပြုလုပ်ရာတွင် အစိုးရမှ ဖြေလျှော့မှုများ ပေးလာသော်လည်း ပြစ်ဒဏ် ကျခံဘူးသူ အကျဉ်းသားဟောင်းများ အနေဖြင့် အကျဉ်းထောင် ထွက်လက်မှတ်များ ထည့်သွင်း လျှောက်ထားရန် လိုဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံကူး လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးအဖွဲ့ရုံး၊ ဌာနခွဲမှူး ၊ ရဲမှူး ကျော်ဇေယျက ပြောသည်။
ကရင်ပန်းချီဆရာများ စုပေါင်း၍ ရန်ကုန်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ပန်းချီပြပွဲပြုလုပ်
ကရင်ပန်းချီဆရာများ စုပေါင်း၍ ပန်းချီ၊ ပန်းပုပြပွဲ တစ်ခုကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ရန်ကုန်မြို့ အမှတ်-၁၆၁၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း အလယ်ဘလောက်၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်တွင် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ ၂၁ ရက်နေ့ ထိ ပြသမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စစ်အစိုးရလက်ထက် ကိုယ်ကျိုးအတွက် သိမ်းယူထားသည့် မြေယာများ ရခိုင်လူထုပြန်ရလို
စစ်အစိုးရ လက်ထက် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် တာဝန်ကျခဲ့သော ပြည်နယ် အဆင့်ဆိုင်ရာ အရာရှိကြီး သိမ်းယူပြီး အသီးသီးခွဲဝေ ယူထားသော ရခိုင်ပြည်နယ် ပေါက်တော မြို့နယ် ငပြီကျွန်း ကျေးရွာမှ လယ်မြေများကို ကျေးရွာသားများက ပြန်လည် ရယူလိုသဖြင့် အထက်သို့ စာရေး တိုင်ကြား လိုက်သည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
ရှင်စောပုအသင်းက နွေရာသီမွန်စာပေ သင်တန်းအတွက် စာအုပ်ပေးလှူ
ရှင်စောပု (မွန်အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရှင်များအသင်း) ၏ ပညာရေးထောက်ပံ့မှု အစီအစဉ်အရ ယခုလ ၁၀ ရက်နေ့ အလုပ်မှုဆောင် အစည်းအဝေးအပြီးတွင် နွေရာသီမွန်စာပေ သင်တန်းအတွက် စာအုပ်ပေးလှူမည့် အစီအစဉ် စတင်အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး မမိုးမိုးက ပြောသည်။
FTUB လုပ်ရပ်အပေါ် MITU ကန့်ကွက်ရှုံ့ချ
မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမား သမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် (FTUB) က မြန်မာနိုင်ငံ စက်မှုဇုံ အလုပ်သမားများ သမဂ္ဂ MITU ၏ အဖွဲ့ဝင် သမဂ္ဂ နာမည်များကို အသုံးပြုပြီး ၀ါဒဖြန့် အင်္ကျီများ ရိုက်နှိပ်ဖြန့်ဝေသဖြင့် မကြေနပ်ကြောင်း ယမန်နေ့က သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပ၍ ကန့်ကွက် လိုက်သည်ဟု MITU အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ကိုအောင်သူက ဆိုသည်။
အမှတ် ၁၄ စစ်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်း ကိစ္စ လူထုရဲ့တင်ပြချက် အပေါ် ဖြေရှင်းချက် မရသေး
အမှတ် ၁၄ စစ်ရေးလေ့ကျင့်ရေးကျောင်း တည်ဆောက်နေမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ လူထုတွေ ကြုံတွေ့ နေကြရတဲ့ ဒုက္ခတွေ၊ ပြဿနာတွေ၊ တောင်းဆိုချက်တွေကို နိုင်ငံတော် သမ္မတနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရထံ တင်ပြထား သော်လည်း တောင်းဆိုထားချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ယခုအချိန်ထိ ကျေနပ်လောက်တဲ့ ဖြေရှင်းချက်တွေ မပေးသေးဘူးလို့ ဆရာသဲရယ်က ပြောပါတယ်။
သြစတြေးလျက မြန်မာကို ဒေါ်လာသန်း ၂၀ ကူမည်၊ စစ်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်
ကာကွယ်ရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးတို့တွင် လက်တွဲဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရန် စီစဉ်ချမှတ်ထားသည့် သြစတြေးလျ နိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအား ဒေါ်လာသန်း ၂၀ ကူညီမည်ဟု ဝန်ကြီးချုပ်က တနင်္လာနေ့တွင် ကတိပေး ပြောဆိုလိုက်သည်။
ရခိုင်အရေး ဓါတ်ပုံ မှားယွင်းဖော်ပြမှု The Daily Star သတင်းစာက ဖော်ထုတ်
ရခိုင်အရေးအခင်း အတွင်း မွတ်ဆလင်များအား အစုလိုက် အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်နေပါသည်ဟု ခေါင်းစဉ် တပ်ကာ ဓါတ်ပုံများဖြင့် နိုင်ငံတကာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ အကြား သတင်း ထုတ်လွှင့် ခဲ့မူများမှာ မှန်ကန်မူ မရှိကြောင်း ယနေ့ထုတ် The Daily star သတင်းစာက ဓါတ်ပုံများနှင့် တကွ စာမျက်နာပြည့် ဖေါ်ပြကာ ဖွင့်ချလိုက်သည်။
Burma News International is an unique network of eleven independent media organizations: Mizzima News, Shan Herald Agency for News, Phop Htaw News Agency, Khonumthung News Group, Narinjara News, Kaladan Press Network, Independent Mon News Agency, Network Media Group, Kantarawaddy Times, Karen Information Center and Kachin News Group.
Copyright © 2011 Burma News International, All rights reserved.
You are receiving our daily news because you signed up at www.bnionline.net
P.O box - 76
Download Burmese font here: http://www.bnionline.net/Zawgyi-One_v4.30_November_14_20.ttf
Sent to thuaung.com@gmail.com — why did I get this?
Burma News International · Burma News International · P.O box - 76 · Chiang Mai University P.O, Chiang Mai 50202